စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်
အမှတ်-၁၅၀ B၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊
1 Diamond Auto Services Co.,Ltd ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊
၁။ ချယ်ရီဥယာဉ်အိမ်ယာ၊ (၁၄/၃) ရပ်ကွက်၊
တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
Sakura Technical Services ၀၁-၅၆၉၀၇၄
2 ၂။ အမှတ် ၀၅-၂၁၊ ရာဇသင်္ဂဟလမ်းမကြီး၊
Co.,Ltd ၀၁-၅၆၃၁၆၅၊ ၀၁-
အင်ကြင်းပန်းအ၀ိုင်းအနီး၊ ဥတ္တရသီရိမြို့ နယ်၊
အမှတ်(၅၃)၊ ပြည်လမ်း၊ (၉) မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်၊
3 Billion Power Services Co.,Ltd ၄၃၁၆၆၈၈၈
အမှတ်-၂၉၊ ၇မိုင်၊ ပြည်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်ရန်၊
4 Shwe Yamone Services Co.,Ltd ၆၈၅၃၃၁
Hightech Princess Services အမှတ်(၁၁၅)ဘီ၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ ၀၁-၂၄၆၁၈၆-Ext ၃၁
Co.,Ltd ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၀၉-၄၃၆၂၆၆၆၆
အမှတ်-၉၂၊ အေစီဒီ၊ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း၊
6 Aye's Family Services Co.,Ltd ပုလဲကွန်ဒိုအနီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊
၁။ မြေကွက်အမှတ်(၂၂) ဥတ္တရသီရိအဆင့်မြင့်ဈေး၊
ဇမ္မူသီရိမြို့ နယ်၊ နေပြည်တော်။ ၂။ တိုင်(A)၊
7 Ram Speed Services Co.,Ltd အခန်း(၁ မှ ၄)၊ မြင်သာအိမ်ယာ၊
သံသုမာလမ်းမကြီး၊ ၁၄/၁ ရပ်ကွက်၊
Ltd ၀၁-၂၀၃၅၁၆ အိုဝမ်းဖွဲနုဆီစက်ဝင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ Sea Cross Express Services အမှတ်(၃၆-၃၈)၊ အလံပြဘုရားလမ်း၊ ၀၁-၂၅၅၆၂၂..Ltd ၅၇၀၅၁၆ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၀၁-၃၈၅၄၁၅၊ ၀၉- First Myanmar Auto Services အမှတ်(၇)၊ သစ်ရာပင်လမ်း၊ သုဝဏ္ဏ(၂၃) ရပ်ကွက်၊ 12 ၅၀၁၉၀၂၄၊ Co.Ltd ၆၅၀၀၂၁ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၀၁-၆၆၄၇၄၀ အမှတ်-V(၃၈/၃၉) မြကန်သာလမ်းမကြီး၊ ၀၁-၂၃၀၀၇၄၃၊ ၀၉- 18 Yaung Ni Oo Services Co.Ext:၇ 13 Co.Ltd ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၀၉-၈၅၁၅၈၈၉ ၀၁-၆၆၄၄၆၃၊ ၀၁- အမှတ်(၆၀) ပြည်လမ်း ၊ လှိုင်မြို့ နယ်၊ 17 Themis Service Co.Ltd ၂၉၃၅၀၀၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၀၁၂၀၃၇၄၈ အမှတ်(၁၉၂)၊ အရှေ့ မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ ၀၁-၄၀၀၁၂၃၊ ၀၁- 15 Myo Motor Services Co......Ltd့ နယ်၊ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး။ ၀၉-၅၅၀၀၈၃၃ ၀၁-၃၉၇၀၄၉၊ ၀၁- အမှတ်(၁၅၈)၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ 14 Fuji Yama Services Co.Ltd မြကန်သာအိမ်ယာ၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့ နယ်၊ ၇၃၀၉၈၆၉၆ .Ltd မာန်အောင်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့ နယ်၊ ၄၀၀၃၉၉ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၀၉-၅၀၂၂၆၀၄ Win Haling Haling Oo Auto အမှတ်(၄၉)၊ မြေကွက်အမှတ်(၁/ခ)၊ ၀၁-၆၈၇၈၃၃၊ ၀၉- 16 Services အုတ်ပုံဆိပ်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ၅၀၀၄၃၄၁၊ Co...Ltd သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၀၉-၄၇၁၂၆၄၀၉ Assurance Services Enterprise အမှတ်(၁၅၉)၊ အနောက်ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို ၀၁-၂၁၅၃၈၂.Lt မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၂၅၅၆၂၃ အမှတ်(၁၇)၊ ဝေဇန္တာလမ်းမကြီး၊ မိကျောင်းကန်၊ Myanmar Jade Crown Services ၀၁-၅၇၂၄၁၄၊ ၀၁- 11 အပိုင်း(၃) ရပ်ကွက်၊ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့ နယ်၊ Co.. ၀၁- 10 Co.. ၁။ အမှတ်(၃၆)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းကြီး၊ မင်းသားကြီးဟိုတယ် ၀န်းအတွင်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြို ၀၁-၆၅၆၂၉၇၊ ၀၉- 8 Sandrar Services Co..Ltd့ နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၇၃၁၈၈၈၈ ၂။ အုတ်ပုံဆိပ်လမ်း၊ အမှတ်(၇၉)၊ ၈ ရပ်ကွက်၊ ၀၉-၅၅၀၀၅၅၅ မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ အမှတ်(၁၀)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊9Charm Services Co.
..Ltd ၈၆၃၈၅၈၅ အနော်ရထာလမ်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၀၉-၅၀၂၃၀၇၇ ၀၁-၆၅၆၇၃၈၊ ၀၁- ၁။ အမှတ်(၇၊ ၈၊ ၉)၊ တိုက်(အေ၊ဘီ၊စီ) ၆၅၆၇၃၉ ရွှေမြယာအိမ်ယာ၊ မင်္ဂလာ တောင်ညွှန့်မြို့ ၊ ၀၉-၇၃၁၅၃၀၇၈ 24 Best Auto Co. ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၀၁-၆၈၂၁၅၇၊ ၀၁- အမှတ်(၂၂)၊ သီရိမွန်အိမ်ရာ၊ ၆၈၂၁၄၇၊ 19 Good Brothers Services Co.Ltd စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၅၀၃၃၈၈ ၀၁-၂၃၀၀၉၉၄၊ ၀၉- အမှတ်(၃၁၂/၃၁၈)၊ အခန်းအမှတ်(၀၀၃၊၀၀၄) ၊ 23 Wun Yan Kha Services Co.Ltd ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၂။ တိုက် (A-3)၊ ၀၁-၃၈၁၂၈၀၊ ၀၉- ရွှေကမ္ဘာမောင်မော်အိမ်ယာ၊ ဓမ္မစေတီလမ်း၊ ၇၃၀၃၇၄၂၈ မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၀၉-၅၀၁၈၉၇၉၊ ၀၉- ၅၁၀၀၃၈၉ အမှတ်(၉-E/၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ (၇) Kaung Say Taman Services ၉၅၁-၃၉၈၃၀၄၊ 25 ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ Co.Ltd ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ လှိုင်မြို့ နယ်၊ ၀၁-၆၈၁၉၈၃၊ ၀၁- ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၆၈၁၆၆၇၊ ၀၁-၆၈၂၇၉၉ ၀၁-၂၂၇၂၂၈၊ ၀၁- Myanmar Acme Services အမှတ်(၂၀၅)၊ သီရိမွန်အိမ်ရာ၊ နှင်းဆီလမ်း၊ 20 ၅၅၄၄၀၇၊ Co..Ltd မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၀၁-၅၅၄၄၀၈ ၁။ အမှတ်(၁၄)၊ န၀ဒေးအိမ်ရာ၊ Aung Thein Than Services & ရန်ကုန်ပုသိမ်လမ်းမကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၂။ ၀၁-၅၃၄၃၄၆၊ ၀၁- 21 Agency အမှတ်(ဃ-၁၅၆)၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း၊ ဇ၀န ၅၂၇၀၇၄၊ Ltd Junction အနီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့ နယ်၊ ၀၁-၅၃၉၇၃၂ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ Golden Fortune Services အမှတ်(၃၂၇)၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ မြေနီကုန်းရပ်ကွက်၊ ၀၁-၅၀၃၃၆၆။ ၀၁- 22 Co....Ltd ၃၉၈၃၀၃ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ .
.Ltd မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၅၀၈၂၃၄ အမှတ်(၆၄၇/A)၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ၀၁-၅၂၆၆၂၆၊ ၀၁- 36 Smooth International Co...Ltd ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၉၀၀၀၂၂၁ Shwe Hein Htet Services အမှတ်(၅၆၃)၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ 28 ၀၁-၅၀၀၁၄၉ Co.Ltd ၇၃၂၂၀၆၆၄ မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၀၉-၇၃၂၂၀၆၆၃ Farmer Phoyazar General အမှတ်(၆၄)၊ ဆရာစံလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့ နယ်၊ ၀၁-၂၀၀၃၈၁၊ ၀၁- 27 Services Co..... ၀၉-၄၃၀၄၀၆၃၈၊ ၀၉- အမှတ်(၁၀)၊ ပြည်သူ့ လမ်း၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ 26 Summit Life Services Co..Ltd ၀၁-၃၇၄၂၅၈ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၀၁-၃၈၁၅၇၅၊ ၀၁- Forever Green Right Services အမှတ်(၁၇၂)၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ 38 ၃၈၁၅၁၉၊ Co.Ltd ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၅၁၃၈၇၅ Super Technology Products အမှတ်(၅၂၀)၊ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း၊ ဗဟန်းမြို 33 ၀၁-၅၅၉၇၄၄ ServicesCo.Ltd ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ အမှတ်(၆)၊ ဘုရင်းနောင်လမ်းမကြီး၊ လှိုင်မြို့ နယ်၊ ၀၁-၅၀၄၇၁၈၊ ၀၁- 32 Oriental Apex Services Co.Ltd ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၅၁၂၁၂၈ အမှတ်(၁က/၂)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ (၂) 37 Five Great Services Co.Ltd ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၀၉-၈၆၁၀၅၁၆ Global Myanmar Services အမှတ်(၁၄) အင်းယားရိပ်သာလမ်း၊ (၁၀) ရပ်ကွက်၊ ၀၁-၅၀၈၂၃၂၊ ၀၁- 35 Co.Ltd ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ အမှတ်(၈/A)၊ မင်းဓမ္မလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်၊ ၀၁-၆၅၆၆၉၀၊ ၀၁- 29 Gold Crane Services Co.Ltd ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၆၅၆၆၉၁ အမှတ်(၂၇)၊ သုခ၀တီလမ်း၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ ၀၁-၅၀၀၅၈၇၊ ၀၁- 30 Win Ko Services Co..Ltd ရန်ကင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၅၀၃၂၆၈ Century Bright Gold Services အမှတ်(၅၇၃/၅၇၅)၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ 31 ၀၉-၅၁၀၅၄၁၁ Co.Ltd မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၀၁-၃၈၂၃၈၀ ...Ltd့ နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ အမှတ်(၉)၊ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း၊ ရွှေတောင်ကြား၊ ၀၁-၅၂၆၆၂၁၊ ၀၁- Friendship Group Services 34 (၂) ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့ နယ်၊ ၅၂၆၈၉၂၊ Co...
.Ltd ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၀၉-၅၁၀၃၄၂၄ အမှတ်(၄)၊ ရတနာလမ်း၊ 43 Dynamic Co.. ဦးပိုင်အမှတ်(၁)၊ အမှတ်(တ-ရ/စ)၊ ၆၉လမ်းနှင့် 39 Themis Services Co.Ltd ဗဟိုလမ်းနှင့်ဟံသာဝတီလမ်းထောင့်၊ ၅၄၂၁၁၁ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ အမှတ်(C-4A. Ltd ကျိုက္ကဆံအနောက်ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့ နယ်၊ ၀၉-၅၀၁၈၀၂၈ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၄၃ (က)၊ ပြည်လမ်း၊ (၇) မိုင်ခွဲ၊ 44 Thit Sar Arman Services Co.Ltd ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၅၀၂၁၈၅ အမှတ်(၄၇/၄၈)ဘီ၊ ၀၁-၄၀၀၈၀၅၊ ၀၁- 48 Nippon Auto Services Co...Ltd သိပ္ပံလမ်းထောင့်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့ နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ အမှတ်(၁၈) ၇၁ လမ်း၊ ၂၈ X ၂၉ ကြား၊ ၀၁-၆၀၄၈၀၊ ၀၉- 40 Best Auto Services Co..Ltd ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၈၅၆၈၄၂၇ ၀၉-၇၃၁၁၆၈၉၈၊ ၀၉- အမှတ်(၉၉/ဘီ)၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ 46 Triple Two Services Co...C-5A..Ltd ၇၃၀၉၈၆၈၃ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၀၉-၇၃၀၉၈၇၀၅ အမှတ်(၈၉)၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ ၀၁-၅၀၂၁၈၄၊ ၀၁- 47 Oasis Auto Services Co.Ltd မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ ၇၃၁၄၆၇၃၄ Kaung Say Taman Services အမှတ်(မ၉/၆)သိပ္ပံလမ်း၊ ၆၃ x ၆၄ လမ်းကြား၊ 41 ၀၂-၃၆၄၆၉ Co..Ltd ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံသစ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၂၉၉၃၅၄ အမှတ်(၃-A)၊ မေခလမ်း၊ (၇)မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို ၀၁-၆၅၆၁၂၅၊ ၀၉- 50 Green Matrix Ltd့ နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး။ ၇၃၀၃၂၇၀၀ အမှတ်(၄၀/က)၊ ဖိုးစိန်လမ်း၊ နတ်မောက်ရပ်ကွက်၊ ၀၁-၆၈၂၇၆၃၊ ၀၁- 51 Aung Gabar Services Co.C-6A)၊ ရိုးကြီးချောင်းပတ်လမ်း၊ ၀၁-၂၉၉၃၅၃၊ ၀၁- 49 General Arr Mahn Thit Co.Ltd ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး။ ၀၉-၇၃၀၀၆၉၃၉၊ ၀၉- The Grand Nay Nan Taw အမှတ်(၃၀)အေ၊ ဘီ၊ ပါရမီလမ်း၊ 42 ၈၆၂၇၇၉၇၊ Co.Ltd တာမွေမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၆၈၄၃၄၆ .Ltd ၀၁-၆၆၅၇၃၈ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ December Light Services အမှတ်(၄/၄)၊ သံသုမာလမ်း၊ သုဝဏ္ဏ၊ ၀၁-၃၇၂၀၁၉၊ ၀၉- 45 Co....
.Ltd ၀၉-၇၃၁၁၁၉၉၉ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ . အမှတ်(၂၂၀)၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ (၁၃) 52 Lucky Center Services Co.